Mbiri yekambani - Shanghai Marlene Industrial Co., Ltd.
Zvikamu Shanghai Marlene Industrial Co., Ltd.
Shanghai Marlene Industrial Co, Ltd.yakakwana yepamusorosoro indasitiri iyo inonyanya kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwezvinhu zvekuvaka zvepurasitiki. Boka redu makiromita 150 kubva Ningbo Port uye 100 makiromita kubva Shanghai Port. Iyo yekufambisa iri nyore kwazvo. Kambani yedu inovhara nharaunda inopfuura zviuru zvisere zvemamirimita uye ine musangano wakaenzana we6,000 mativi emamirimita, iine matatu epamberi ekugadzira mitsara, 2 co-extrusion michina, 2 polymer yekutsvagisa nekuvandudza marabhoritari, matatu akaunzwa marara ekuongorora zviridzwa, uye 5 anti-kuchembera bvunzo mabhokisi, uye matanhatu seti eakasiyana ekuyedza komputa zviridzwa.
Neye gore rinobuda rinopfuura matani chiuru ezvekuvakisa zvakasiyana. Kune akakwana ehunyanzvi ekutsvagisa mauto kuti agare kumberi kwemakwikwi anotyisa emusika. Zvigadzirwa zvedu parizvino zvakagadzirwa zvinosanganisira PVC yekunze madziro akarembera mapaneru, PVC huni-epurasitiki pasi, PVC matanda-epurasitiki ekunze madziro emadziro, PVC musu uye mahwindo mitsetse, PVC mizhinji-mavara co-extruded chikumbaridzo, PVC staircase inoteedzera huni handrails, PVC madziro epaneru. , PVC makona emadziro, uye nhevedzano yezvivakwa zvekushongedza zvinhu senge huni-plastiki fenzi. Zvigadzirwa zvedu zvine super weather resistance, anti-tarnishing, isapinda mvura, zvipembenene-proof, anti-mildew, murazvo-unodzivirira, kupisa kupisa, kuputira kurira, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, uye zviri nyore kugadzirisa. Iyo yepamusoro haidi kuvezwa kana kupendwa. Ruvara rwakapfuma uye rwakajeka. Inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Mushure mekushongedza, vanhu vanogona kupinda mukati nekukasira, haina benzene kana formaldehyde, haikonzere chero kukuvadza kune vakadzi vane nhumbu, vacheche uye vana vadiki, haidi yekutarisirwa yekutevera. Iyo warandi iri pamusoro pezvakafanana zvigadzirwa kusvika makore makumi mashanu. Zvigadzirwa zvekambani yedu zvinoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, zvipatara, dzimba dzevakwegura, nhandare, zvikoro, mahotera, zvivakwa zvehofisi uye zvimwe zvemukati uye zvekunze zvekuvaka mapurojekiti, pamwe nemotokari, midziyo yemagetsi, zvemagetsi, zvekutambisa, zvekurapa, zvigadzirwa zvemapaipi , uye panze pegadheni hombe pasi uye hydrophilic pasi, fenzi, magadhi ekuvharira, njanji dzekumisa mabhazi, mamaspala emabhokisi emapurojekiti, dzimba dzekunze dzekunze, matafura ekuzorora ekunze uye zvituru, mimvuri yezuva, fenicha yekumusoro-soro, nezvimwe zvigadzirwa zvekambani yedu ndezvino , akasiyana, akanakisa mhando uye anonzwisisika mumutengo. Kubva zvavakaiswa mumusika, vakagamuchirwa zvakanaka nevatengi.Iyo yekutengesa network inovhara ese makuru, epakati uye madiki madhorobha munyika medu, uye iri kuwedzera nesimba misika yekukunze. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuNorth America, Middle East, Southeast Asia nedzimwe nyika uye matunhu, uye zvinozivikanwa munzvimbo nenzvimbo kune avo akasiyana zvigadzirwa, epamberi manejimendi manejimendi uye akakwirira masevhisi. Mubasa remangwana, isu ticharamba tichivandudza edu ehunyanzvi zviyero, kugadzira zvigadzirwa zvitsva uye matekinoroji matsva, dhizaini nyowani uye kukudziridza akasarudzika akachengeteka uye ane zvakatipoteredza mhinduro mhinduro zvinoenderana nevatengi zvinoda kusangana nezvinodiwa pamusika uye zvirinani kushandira vatengi.Shingairira pamwe nevatengi vatsva nevekare kuti vatsvage zvakajairika kusimudzira, kambani yedu inoomerera kune iro bhizinesi tenet re "Mutengi Kutanga, Kutendeseka Kutanga, Hunhu hwekutanga, Shingairira Kunaka", uye shingairira kuve bhizimusi rekutanga-chikamu muindasitiri yepurasitiki. Isu tine chokwadi chekuti neyekutanga-kirasi mhando, inonzwisisika mutengo, kutendeseka bhizinesi uzivi uye yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi, isu tichakwanisa kushanda pamwe newe kuti tigadzire kupenya!
Shanghai Marlene Industrial Co, Ltd.iri bhizinesi rinonyanya kuverengerwa mukushambadzira kwekunze kwekunze, kunyanya kuita tekinoroji yekugadzira epurasitiki zvigadzirwa extrusion kuumbwa. Yedu kambani yekuwedzera zvigadzirwa zvigadzirwa zvinoshandisa izvo zvitsva zvigadzirwa zvakagadzirwa neMitsubishi Corporation yeJapan neDuPont yeUnited States. Yakasanganiswa netekinoroji yakura uye nzira dzakaperera dzekuyedza, inoona kuti zvigadzirwa zviri nani kupfuura zvigadzirwa zviri muindasitiri imwechete maererano nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kupokana nekukwegura uye kupera, uye zvasvika pakuedzwa kwepasi rose. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, South America, North America, Southeast Asia, Hong Kong, Macao neTaiwan. Munyika zhinji nematunhu, huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa hunoshandiswa muminda yakawanda senge kushongedzwa kweimba, paki zvigaro zvepasi, dzimba dzakura, mota uye zvekutakura zvekushongedza uye kushongedza. Iko parizvino ndeimwe yeakanyanya kuwanda epurasitiki ekuvakisa zvigadzirwa zvekugadzira muindasitiri.